"योगले जीवन सफल र सार्थक बन्न सक्छ" -
लामो समयदेखि योग अभियान संचालन गरिरहेका विष्णुहरि आचार्य, योगीराज आचार्यका नामले परिचित छन् । योग अभियान्ता आचार्य पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरु तथा क्वारिन्टिनमा बसेकाहरुलाई योग अभ्यास गराई रहेका छन् । मानसिक रुपमा सवल बनाउन योग उत्तम विकल्प हुने उनको बुझाइ छ । गोधुलि मिडियाका लागि उनीसँग गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंश ….
गोधुलि न्यूजमा उहाँलाई स्वागत छ ।
यहाँ योगा अभियान्ता पनि हो । योगलाई सरल भाषामा कसरी बुझ्ने ?
हजुर, योग भन्नासाथ मन र कर्मसँग जोडिएको विषय हो । योगले चित्त अर्थात मनलाई शुद्धबनाई कर्ममा निखारता ल्याउने हो । योग भित्र ध्यान, प्रणायमलगाएतका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । योगको नियमित साधनाले मानसिक विकारहरु हटाइ शारीरिक स्फूर्ति ल्याउने काम गर्दछ । सरल भाषामा योगलाई मन र कर्मलाई जोड्ने अभ्यासका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । मनको निर्देशनमा होइन, मनलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि योग र ध्यानले काम गरेको हुन्छ । आत्मा, शरीर र मनलाई एकाकार गर्ने माध्यमको रुपमा समेत योगलाई लिन सकिन्छ । योगको शुरुवात गौतम बुद्वको समय देखि भयको मानिन्छ । जुन हाम्रो पूर्वीय संस्कार हो । योग आफैंमा विज्ञान हो । यसका आफ्नै नियमहरु हुन्छन् । ती नियमहरु राम्रो तवरले पालना गर्न सके योगको माध्यमबाट हाम्रो जीवन सफल र सार्थक बन्न सक्छ ।
योगलाई कोरोना संक्रमण र संक्रमितहरुसँग जोड्न सकिन्छ ? कसरी ?
अहिले विश्व नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जुधिरहेको छ । यसको औषधी पनि तयार भएको छैन् । त्यतिमात्र होइन यसको बास्तविक असरमा समेत अन्योलता देखिएको छ । यसविचमा शरिरमा हुने प्रतिरक्षा प्रणाली जसलाई हामी इम्युनिटी पावर पनि भन्ने गर्दछौँ त्यसको विकास गर्न सके फ्लु जन्य संक्रमणबाट बच्न सकिने तथ्यहरु भेटिएका छन् । मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली विकासका लागि आर्युवेद तथा योगको ठूलो महत्व रहन्छ । अझ भनौ योग र आर्युवेदमा मात्र त्यो सम्भव छ । त्यसकारण पनि आजको यो अवस्थालाई हामी पूर्ण रुपमा आर्युवेद तथा योगसँग जोड्न सक्दछौँ । संक्रमितहरुको हकमा होस वा अन्य व्यक्तीहरुकोलागि पनि हामी योग अभ्यास सहित आर्युवेदिन औषधीहरुको सहि प्रयोगमा जोड दिन सकिन्छ । उनीहरुको मानसिक तथा शारीरिक समस्या समाधानका लागि पनि योग र आयुर्वेद अति नै उपयोगि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । पूर्वीय दर्शनमा आधारित उपचार पद्धति भएकाले पनि यसमा कुनै साइड इफेक्ट छैन् ।
यहाँ लगाएतको टोलीले रुपन्देहीमा रहेका क्वारेन्टिनहरुमा रहेका संक्रमितहरुका लागि योग तालिम दिँदै हिड्नु भएको छ । यसको अवाश्यकता कसरी महसुस भयो ?
जव कोरोना संक्रमणको त्रास विश्व भर फैलियो तव हामीलाई नेपालमा पनि यो अवस्था आउन सक्छ भन्ने लागेको थियो । नभन्दै नेपालमा पनि संक्रमण भन्दा पहिला नै त्यस प्रकारको त्रास आइहाल्यो । संक्रमण पनि सँगसँगै आयो नै । त्यस पछि हामी जनताको आत्मवल बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा लाग्यौँ । आत्मवलसँगै प्रतिरक्षा प्रणालीको पनि विकास अवश्यक देखिएको थियो । आत्मवल बृद्धि गर्ने सवभन्दा उत्तम उपाय भनेकै योग अभ्यास हो भने प्रतिरक्षा विकासका लागि आर्युवेदिक औषधी । यसरी दुवैको संयोजनलाई व्यापक रुपमा व्यवहारमा उर्तानु पर्छ भन्ने गरी काम भएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक आर्युवेद कार्यालयले हामीलाई खटाउने योजना बनायो र हामी काममा जुटेका हौँ ।
अहिले यहाँले जिल्लाका धेरै क्वारेन्टिनहरुमा योग अभ्यास गराउनुभएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
हो, म लागाएत हाम्रो टिम नै यसमा लागि रहे कै छौँ । प्रदेश ५ को समाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुरुप नै लुम्बिनी आर्युवेद कार्यालय मार्फत हामी गरिरहेका छौँ । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुमा कोरोना भाइरसको त्रास, बन्द जीवनशैली आदिका कारण मानसिक समस्या नहोस र आत्मवल उचो होस भनेर हामी योगलाई विषेश महत्व दिन्छौँ भने इम्युनिटि पावर बढाउन आर्युवेदिक औषधीको पनि प्रयोगमा जोड दिन्छौँ ।
जव हामी सुरु सुरुमा योग र आर्युवेदका कुरा लिएर क्वारिन्टिनमा गयौँ । सवैमा अन्योल नै पाउँथ्यौँ । तर पछि पछि भने यसको राम्रो प्रभाव पर्न थाले पछि माग पनि हुन थाल्यो । कतिपयमा त अभूतपूर्व आत्मवल बृद्धि भएको पनि पाइयो । उहाँहरुबाट पनि सकात्मक प्रतिकृयाहरु आएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका देखि पश्चिमी क्षेत्रहरुमा पनि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ । उहाँहरुमा सकारत्मक उर्जा दिन सफल भएको महसुस गरेका छौँ ।
कसरी योग अभ्यास गराउनुहुन्छ ? केही विधीका बारेमा पनि चर्चा गरिदिनु हुन्छ ?
अवस्य पनि योग अभ्यास व्यवहारवादी विधी हो । भाषामा यसको सहि व्याख्या नहुन पनि सक्ला तर पनि म छोटकरीमा केही विधीहरुका बारेमा चर्चा गर्ने छु । हामीले समान्य रुपमा नै योग अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने जागरणका रुपमा अघि बढेका छौँ । पहिलो चरणमा हामी तन्त्रयानमा आधारित मनलाई एकाग्र बनाउन मद्दत पुगोस भनेर ध्यान गर्दछौँ । यसमा अल्लाहा होस वा ओमकार वा आफ्नो समुदाय अनुसारको आत्मिक शव्द उच्चारणबाट गरिनछ जसले मनलाई अनुसाशित बनाउन मद्धत गर्दछ । त्यस पछि हामी कपालभाति, आनापाना, लामोलामो सास लिने फ्क्याने जस्ता कार्य हुन्छन्् । अन्त्यमा नाजमा आधारित कार्य हुन्छ । पहिलो चरणमा हामी सामान्य नै गराउँछौ त्यस पछिका चरणमा उहाँहरुको चासोका आधारमा योग अभ्यास गर्ने गर्दछौँ ।
यहाँ लामो समय देखि आयुर्वेद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । सरकारले आर्युवेदलाई कत्तिको महत्व दिएको पाउनु भएको छ ?
यो क्षेत्रले जति महत्व पाउनु पर्ने हो त्यति नपाएको भए पनि पछिल्लो समय योग आर्युवेद प्रतिको जागरण भने सुरु भएको छ । मानिसहरु यस तर्फ आक्रसित भएका छन् । यो हाम्रो मौलिक उपचार विधी हो । लामो समयको अभ्यासबाट खारिएको उपचार विधी भएकाले पनि यसमा सवै क्षेत्रको ध्यान जानु आवस्यक देखिन्छ । विश्व समुदायले विषेश रुपमा अंििगकार गरिसकेको छ । चीनले मौलिक उपचार पद्धति भनेर स्वीकार गरेको छ भने भारतमा पनि यसलाई राज्यले ठूलो महत्व दिएको छ । नेपालमा भने जति महत्व दिनुपर्ने हो त्यति दिएको पाइदैन् । नेपाल सरकार होस वा प्रादेशिक सरकारले बजेट देखि कार्यक्रमहरु त बनाएका छन् । तर जति स्थान दिनु पर्ने हो प्राप्त भने छैन् ।
यहाँले विगत लामो समयदेखि योग अभ्यास संचालन गर्नुभएको थियो । अहिले त्यो अभियान के भैरहेको छ ?
हजुर, म झन्डै २५ बर्ष देखि योगमा जागरण ल्याउनुपर्छ भनेर लागि रहेको छु । हरेक बर्ष ठाउँठाउँमा शिवीरहरु संचालन समेत गर्ने गरेको थिए । अहिले भने अवस्था विषम छ । यसलाई त्यो अभियानसँग जोडिएको छैन् । तर पनि अभियानको लक्ष्य अनुरुप नै परोक्ष रुपमा काम भैरहेको छ । अहिले हामी निष्चित निर्देशिका अनुरुप काम गरिहेका छौँ । अभियानका रुपमा होइन् ।
मलाई योग र आर्युवेदका बारेमा विचार र अभियानका बारेमा चर्चा गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि गोधुलि मिडियालाई धन्यावाद दिन चाहान्छु । हामीहरु केही समय भए पनि आफ्नो लागि छुट्टाउँ र नियमित योग अभ्यास गरौँ । यसले रोगबाट बचाउने मात्र होइन फिटनेश र तन्दुस्त राख्नमा पनि मद्धत पुर्याउँदछ । योगलाई जीवनको एउटा अंशका रुपमा लिनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस भन्न चाहान्छु । धन्यावाद ।
पाल्पाको तिनाउ टिपर व्यवसायी संघले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई ५३ टिपर निर्माण…
मलाई त राजनीतिक जन्मघरमा आएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ: मन्त्री रायमाझी
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जनाको मृत्यु ५५९ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि